कस्ता छन् गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर ? - inaruwaonline.com
कस्ता छन् गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ०३, २०७४ समय: ३:३४:५४
टिमवर्कमा काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्नुहुन्छ । बनेको टिमलाई अघि बढाउन राम्रो नेतृत्व गर्नुहुन्छ । आफ्नो टिमलाई सँधै आत्मविश्वास दिएर काम लगाउने उहाँमा क्षमता छ । काम सुरु नै नगर्ने, सुरु गरेपछि त्यसलाई पूरा गरेरै छाड्ने र पूर्ण रूपले कामप्रति समर्पित रहने उहाँको स्वभाव छ । कहिलेकाहीँ झट्ट रिसाए पनि केहीबेरमै त्यसलाई ‘रियलाइज्ड’ गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा इगो राख्नुहुन्न । आफूले गर्ने कामबारे बुझ्न खोज्ने र बुझेर मात्र काम गर्ने स्वभाव छ ।
अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।